Aniga oo ah (wiil 15 jir ah) waxaan saaxiib la’ahay gabar Jarmal u dhallatay. Inta baddan waxaynu kala leenahay fikrado kala duwan: waxay u labisataa si dareenka qofka kicinaysa. Inta baddan ayadu waxay samaysaa waxyaabo ayada oo aan ii sheegin ama aan ila soconin. Anigu midaasi ma jecli. Ma yihiin dhammaan gabdhaha Jarmalka kuwo sidaan oo kale ah?
Du bist hier: Startseite / Aniga oo ah (wiil 15 jir ah) waxaan saaxiib la’ahay gabar Jarmal u dhallatay. I...
Ma ahan dhammaan gabdhaha Jarmalka kuwo isku mid ah.
Si kastaba, waxyaabahaan soo socda waa kuwo aad muhiim ugu ah inbaddan oo gabdhaha iyo dumarka ah:
Waxay doonayaan in ay u noolaadaan si xuriyad ah oo la mid ah sida ay wiilasha iyo nimanku u noolyihiin.
Midaan macnaheedu waxay tahay: waxay doonayaan in ay helaan xuquuqo isku mid ah.
Si kastaba, midaasi macnaheedu ma ahan in ay doonayaan in ay helaan lammaane kale ama gooni ah.
Kaliya waxay tahay gabdhuhu in ay rabbaan in ay qaraarkooda gacantooda- ku samaystaan.
Waxay doonayaan in ay go’aankooda ayaga qaataan, tusaale ahaan:
Waxay rabbaan in ay xirtaan dharkasta oo ay jeclaadaan.
Waxay doonayaan in ay la kulmaan gabdhaha ay saaxiibada yihiin, xitaa ayaga oo aan lala soconin.
Sidoo kale qaarkooda waxay doonayaan in ay saaxiibo la noqdaan wiilal.
Si kastaba, midaan waxba ma khuseyso xiriirka aad la leedahay gabadha.
Saaxiibtaada aad ayay kuu jeceshahay.
Laakiin sidoo kale ayadu waxay doonaysaa in ay sii wadato la kulanka dad kale, gabdho iyo wiilalba.
Gabar kasta waa mid ka duwan mida kale.
Kala hadal saaxiibtaada waxyaabaha dareenkaaga ku saabsan.
Isku sheega waxa aad iska rabtaan.
Kadibna waxaad isku fahmi doontaan si wanaagsan.
https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png 0 0 editorialteam https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png editorialteam2017-06-09 12:12:442017-06-09 12:12:44Aniga oo ah (wiil 15 jir ah) waxaan saaxiib la’ahay gabar Jarmal u dhallatay. Inta baddan waxaynu kala leenahay fikrado kala duwan: waxay u labisataa si dareenka qofka kicinaysa. Inta baddan ayadu waxay samaysaa waxyaabo ayada oo aan ii sheegin ama aan ila soconin. Anigu midaasi ma jecli. Ma yihiin dhammaan gabdhaha Jarmalka kuwo sidaan oo kale ah?